Apple Watch Series 3 LTE Inotangisa muDenmark, Sweden, India neTaiwan | Ndinobva mac
Apple Watch Series 3 LTE inotanga kuDenmark, Sweden, India neTaiwan
Denmark, Sweden, India neTaiwan, Ivo vatove nemhando dzinowanikwa muApple zvitoro uye vanobvumidzwa vatengesi. Pasina kupokana isu takatarisana nechigadzirwa chiri kudhura kupfuura zvakajairwa kutanga kutengeswa munyika dzese.
Chiziviso chepamutemo chekuburitswa kwaMay 11 chakauya mwedzi wapfuura uye ikozvino vashandisi vanoda kutonakidzwa neiyi modhi nekubatana kweLTE. Zvino isu tichafanirwa kumirira chimwe chiziviso kubva kuApple kuti tione kana chasvika kune dzimwe nyika, tinogona kunge tine nhau kuWWDC iri padhuze muna Chikumi.
Vanoshanda uye Apple
Hapana mubvunzo kuti ndiro dambudziko hombe mukuparadzirwa kwechigadzirwa sezvo ichisanganisira sim kadhi mukati uye mushandi ari pamusoro pekutaurirana nezvekutengesa neApple. Izvo zvinoda kuziva kuti semuenzaniso muFrance, kana vaine Apple Watch Series 3 inomhanya neOrange uye kuSpain havana, asi icho chinhu chinogona kugadziriswa chete pakati pemakambani.
MuTaiwan vashandisi vashanu vachapa LTE ikozvino yeApple Watch uye kune dzimwe nyika kune imwechete kana maviri, zvinoenderana nenyika. Nekutanga kweApple Watch Series 5 LTE muDenmark, Sweden, India neTaiwan, kune nyika gumi nenhatu dzinenge dzave kutengeswa:
Jeff Williams yakatitambidza nemhando nyowani yeApple Watch, musi waGunyana 15, 2017 uye ruzivo rwayo rukuru kana chakatanhamara kwaive kubatanidzwa kweLTE, neiyi wachi inova yakanyanya kuzvitonga uye inobvumidza iwe kuita kana kugamuchira mafoni usingashandise iyo iPhone. Uye zvakare, nemakrofoni yayo yakagadziridzwa uye mutauri, hazvichadiwe kusimudza ruoko rwako kusvika pakakwirira pemuromo wako kuti uite hurukuro. MuSpain isu tichakamirira Apple nevashandisi kuti vabvume kuvhura wachi itsva, asi iyo inotevera vhezheni ichaburitswa uye isu ticharamba tichimirira zvinoita kunge.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch Series 3 LTE inotanga kuDenmark, Sweden, India neTaiwan
Maitiro ekushandura yako Mac skrini kuti ive nhema uye chena
Maitiro ekuburitsa maNotes kuPDF fomati